U Doodista Xafiiska Dhibbanayaasha Dembiyada-Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Dhibbanayaasha Dembiyada & Badbaadada Dadweynaha|U Doodista Xafiiska Dhibbanayaasha Dembiyada
Miyaad tahay dhibbane rabshad guri, faraxumeyn galmo, dabagal, ama dambi kale? Ma taqaan qof dhibane dambi ah?
Tilmaanta Kheyraadka ee U Doodista Dhibaneyaasha Xafiiska Dembiilayaasha ayaa kaa caawin kara inaad ka heshid adeeg bixiye dhibbane aan degdeg ahayn Gobolka Washington. Adeeg bixiye kasta wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin: faragelinta dhibaatooyinka, u doodista, kooxaha taageerada, daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka maskaxda, guryaha ku meel gaarka ah, iyo hoyga degdegga ah. Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah bixiyeyaasha adeegga ayaa diiradda saari kara rabshadaha guriga ama faraxumaynta galmada. Meel ka hel ilo
Tilmaamaha ku saabsan Tilmaamaha Kheyraadka ee Haweenka ee Rabshadaha lagula kaco ee ku saabsan COVID-19
Abriil 21, 2020. Xafiiska Rabshadaha Ka Dhanka ah Haweenka wuxuu soo saaray Hagahan Kheyraadka si looga jawaabo su'aalaha ku saabsan maareynta deeqda, waajibaadka iyo xulashooyinka ku saabsan sida loo shaqeeyo loona bixiyo adeegyada.
Xaaladda cusub Hubinta Asalka oo leh OVC iyo Miisaaniyadda Federaalka ee OVW.
Fadlan booqo boggan wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan xaaladda cusub ee ku saabsan baaritaanka taariikhda ee OVC iyo OVW Federal Funds.
Cusbooneysiinta iyo Macluumaadka Shaqaalahayaga
Ka ganacsiga dadka - Oktoobar 2020
Waa maxay ka ganacsiga dadka? Ka ganacsiga dadka waxaa ka mid ah ka ganacsiga iyo ka ganacsiga galmada. In kasta oo dad badani jeclaan lahaayeen inay aaminaan dambigaan uusan ka dhicin bulshadayada, way dhacdaa. Ka ganacsiga dadka wuxuu ka dhacaa Gobolka Washington wuxuuna saameyn ku yeeshaa caruurta, dhalinyarada, dadka waaweyn iyo qoysaska. Ka ganacsiga Dadku waa adeegsiga xoog, khayaano ama qasab si loogu qasbo qof nooc kasta oo shaqo (sharci ama sharci darro ah) ama adeeg ah oo ka dhan ah rabitaankooda. Ka ganacsiga dadka
Kheyraadka Tababarka ee Internetka
COVID-19 waxay saameyn ku yeelatay awoodda barnaamijyo badan oo ay kaga qayb geli karaan tababarro shaqsiyeed iyo shirar. Si kastaba ha noqotee, ururo badan oo ka shaqeeya adeegyada dhibbaneyaasha iyo isbahaysigu waxay si guul leh ugu gudbeen bixinta tababarka khadka tooska ah. Dhowr ka mid ah fursadahaan waxaa lagu bixiyaa qiime ka jaban kharashyada caadiga ah ee diiwaangelinta. Intaa waxaa sii dheer, inbadan oo ka mid ah tababaradaan ayaa bixinaya faa iidada dheeri ah ee duubista si markaa si fudud looga heli karo. OCVA waxay diyaarisey liis kusaabsan ilaha tababarka ee laga yaabo inay bixiyeyaashu xiiseynayaan. Liiskan
Waaxda Ganacsiga ee Washington
Khadka Deeqaha: 1-866-857-9889
Khadadka Adeegga Tooska ah: 1-800-822-1067
Tilmaamaha Waalidka / Daryeelaha ee Caawinta Qoysaska La Qabsashada Cudurka Coronavirus 2019 (shabakad)
Hubinta Asalka oo leh OVC iyo Miisaaniyadda Federaalka ee OVW (shabakad)
U Diritaanka Rabshadaha Qoyska ee DSHS (shabakad)
Khadadka Caawinta Dhaladka ee Xooggan (shabakad)
Shabakadda Qaranka ee Cadaadiska Dhibaatada Carruurta: Kheyraadka loogu talagalay Waalidiinta iyo daryeelayaasha ku saabsan Dhibaatada Carruurta iyo Dhallinyarada (shabakad)
Isbahaysiga Washington ee Barnaamijyada Weerarka Galmada (shabakad)
Isbahaysiga Gobolka Washington ee Ka Soo Horjeeda Rabshadaha Qoyska (shabakad)
Xarumaha u doodista caruurta ee Washington (shabakad)
Xiriirka Washington (shabakad)
Cusbooneysiinta Emailka OCVA
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ahBayaanka Gaaritaanka